UFati Niang wethula iloli lokuqala lokudla kwase-Afrika e-Paris - Afrikhepri Fondation
NgoLwesihlanu, Septhemba 25, 2020
iminithi funda iminithi eli-2
I-Fati Niang - I-spoon emnyama
Dthola umqondo wokuqala wohlobo neloli kuphela lokudla okudla kwase-Afrika eParis. IBlack Spoon yasungulwa nguFati Niang futhi iguqula ukudla emigwaqweni. Lokhu ukubheja ngesibindi okwenziwe uFati Niang, umphathi we-akhawunti wangaphambili wama-akhawunti amakhulu eSuez Environment. Ngemuva kokwenza izifundo eziningi kwezamabhizinisi, le ntokazi yethule iloli layo lokudla. Kusukela ngoDisemba 19, 2013, iBlack Spoon ihlangene nomnyango we-Ile-de-France futhi inikezela abedlula ngendlela yokudla okuhle kwase-Afrika. Futhi iloli lokuqala lokudla laseFrance ukunikela ngalolu hlobo lwe-gastronomy, ukujabulisa abathandi be-cuisine yakwamanye amazwe.
Sithola kumenyu yonke amakhono eSenegal, izwe lemvelaphi kaFati Niang. Ukuze abasize bathole izimangaliso zayo, lona wesifazane osemncane uhlinzeka ngokupheka kanye nokudla okujwayelekile kumakhasimende ukukhiqiza lezi zitsha ekhaya. Kumenyu, uzothola ama-classics anjengeTiep Bou Dienn (esekelwe kunhlanzi), i-Peanut Mafé edumile ne-lemony Yassa Inkukhu kakhulu. Njengesitsha esisehlangothini, ungazikhethela phakathi kwelayisi, ama-plantain, ama-pastel ama-tuna kanye nama-donuts. Kwi-dessert, kuzoba kuthandeka, isaladi lezithelo noma iTiakri lapho "umbuzo wokuphuza", kuzoba ithuba lokuthola ingcebo yase-Afrika kule ndawo efana neBissap ne-Soursop (amajusi anezithelo ezingajwayelekile). Ngemenyu egcwele, bala ama-euro angama-8.50, futhi kufanelekile. Uma unentshisekelo ekudleni komgwaqo, ungaphuthelwa noma yiziphi izindaba ngale ndaba ngokubhalisa kwifayela lethu elikhethekile.
Ubani ababeyiQuamina noJack Gladstone?